‘मेरी मामु’को शिर्ष गीत रिलिज- ‘आमा’को महत्व खोज्दै आयुव (भिडियोसहित) - Daily Lokmandu
[ January 15, 2019 ] यस्तो बन्यो झक्कड थापाको गीत ‘कानमा डबल झुम्का’ (भिडियो)	मनोरंजन
Homeमनोरंजन‘मेरी मामु’को शिर्ष गीत रिलिज- ‘आमा’को महत्व खोज्दै आयुव (भिडियोसहित)
July 27, 2018 मनोरंजन Comments Off on ‘मेरी मामु’को शिर्ष गीत रिलिज- ‘आमा’को महत्व खोज्दै आयुव (भिडियोसहित)
काठमाडौं । निर्माता तथा कलाकार सन्तोष सेनको आगामी फिल्म ‘मेरी मामु’ को शिर्ष गीत सार्वजनिक भएको छ । काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै फिल्मका निर्माण पक्षले ‘आमा’ बोलको गीत सार्वजनिक गरेको हो । सार्वजनिक गरिएको ‘आमा’ गीतमा रवी मल्लको शब्द, कल्यान सिंहको संगीत तथा रोहित जोन क्षेत्रीको आवाज रहेको छ ।
गीतको भिडियोमा फिल्मका मुख्य कलाकार आयुव सेन र सारुक ताम्राकारले फिचरिङ गरेका छन्, जहाँ आफुलाई जन्मदिने आमाको महत्वलाई प्रस्तुत गरिएको छ । कक्षा तीनमा पढ्दै गरेका बाल कलाकार आयुव सेनले गीतमा आफ्नो भुमिकालाई न्याय गरेका छन् ।
‘प्रेमगीत’ र प्रेमगीत २’ को अपार सफलता पश्चात आसुसेन फिल्मसले फरक धारमा पनि फिल्म बनाउनुपर्छ भन्ने उदेश्यका साथ ‘मेरी मामु’ निर्माण गरिएको निर्माता सेनले बताएका छन् । यो फिल्मलाई काठमाडौं, नौबिसे, दामन, हेटौंडा र चितवनका विभिन्न ठाउँहरुमा छायाङ्कन गरिएको छ ।
आगामी भदौ १५ गतेबाट दर्शकमाझ रिलिजमा आउँदै गरेको यो फिल्मलाई यम थापाले निर्देशन गरेका हुन् । फिल्मको कथा लेखन पनि निर्देशक थापाको आफ्नै रहेको छ । फिल्मको शीर्ष गीत सार्वजनिक कार्यक्रममा उपस्थित निर्देशक थापाले ‘मेरी मामु’ले आमा छोराको सम्बन्धलाई पर्दामा प्रस्तुत गर्ने बताउँदै भने, ‘आमाले आफ्नो छोरालाई आँगनमा रोपिएको तुलसीको बोटमा पानी हाल्नु भन्दा नमान्ने छोराले आफ्नो आमाको मृत्युपछि सँधै ती तुलसीको बोटमा पानी लगाउँछन् । यसै सेरोफेरोमा ‘मेरी मामु’ बनेको छ ।’
यो फिल्ममा सात वर्षीय आयुव सेन, सारुक ताम्राकार, प्रेमगीत २ फेम अभिनेत्री अस्लेशा ठकुरी, कुसुम गुरुङ, दुर्गा मल्ल लगाएतको मुख्य भुमिका रहेको छ । साथै फिल्ममा कलाकार भुवन चन्द पनि विषेश भुमिकामा देखिने छन् । कार्यक्रममा फिल्मका मुख्य कलाकार आयुव सेन, सारुक ताम्राकार, अस्लेसा ठकुरी, कुसुम गुरुङ, लगाएत निर्माण टिम उपस्थित थिए ।
यो फिल्मलाई पुरुषेत्तम प्रधान र मानकृष्ण महर्जनले खिचेका हुन् । बनिष शाह र भुपेन्द्र अधिकारीको सम्पादन रहनेछ । फिल्ममा समावेश गीतहरुलाई गोपाल रसाईली र संजिव बराईलीको एरेञ्जमा अन्जु पन्त, प्रताप दास, रोहित जोन क्षेत्री, त्रिशाला गुरुङ र बादल थापाले स्वरबद्ध गरेका गरेका छन्
फिल्मको मुख्य सहायक निर्देशकको रुपमा ललित विष्ट र सहायक निर्देशकको रुपमा किरण आचार्य, दिपान्कर रत्नशाक्य, राकेश दाहाल र विनय पौडेल रहेका छन् ।
फिल्मको कार्यकारी निर्माताको रुपमा रेशम जंग शाह रहेका छन् । फिल्मलाई सन्तोष सेनले प्रस्तुत गरेका हुन् ।
किन पछाडि प्वाल परेको पाइन्ट लगाउँछन् चिनियाँ बच्चा ?
हाँसो रोक्न नसकिने अचम्म लाग्दा २७ तस्विरहरु !
यस्तो बन्यो झक्कड थापाको गीत ‘कानमा डबल झुम्का’ (भिडियो)
भोलि माघ महिनाको पहिलो दिन ! माई भगवतीको दर्शन गरेर, भेटी स्वरुप एक एक शेयर गर्दै राशिफल पढ्नुहोस (4,525)
माघे संक्राती कै दिन भयानक दुर्घटना एक सशस्त्र प्रहरी सहित घटनास्थल मै ३ जनाको मृत्यु #RIP (3,569)
‘नेपालमै खनिखोस्री गरी खाउ, मलेसिया नआउ’…सक्दो शेयर गरौ (1,975)
एक्कासी खुट्टाबाट पिप र रगत बग्न लागेपछि कृष्णलाई लिएर रुपा पुगिन ग्राण्डी अस्पताल ! (1,938)
मृत्यु भई किरिया समेत गरेका श्रीमान जिउँदै घर फर्किएपछि…… (भिडियाे) (1,765)
नागको अन्डा देख्ने मान्छे भाग्यमानी हुन्छ रे ! तपाई पनि यो भिडियो हेर्नुस अनि शेयर गर्नुस !! (1,602)
गर्भवती महिलाले रक्सी खाँदा यस्तो बच्चा जन्मियो, हेर्दा आमाको मात्रै होईन सबैको सातो गयो (1,573)
दुबै मृगौलाले काम नगर्ने भएपछि एक नेपाली युवा युएईमा जीवन मरणको अन्तिम क्षणमा छटपटाउँदै…… (1,187)
रुकुमका कृष्ण ओलीको जीवनमा जे घट्यो, म मात्रै हैन सबै नेपालीको आखामा आँसु छ, एक शेयर गरी… (25,159)
यी हुन नेपाल आयल निगमले पाएको अर्का कुलमान घिसिङ जस्तै महाप्रबन्धक : पहिलो दिन नै इन्धनको… (21,738)
#OMG……… घाँटीमा गुट्खा अड्किएर मृत्यु (16,540)
सपनामा यी ५ चिज देख्नुभयो भने कसैलाइ नसुनाउनुहोस, मालामाल हुनु हुने छ(भिडियाे) (15,119)
बिराटनगरमा बिस्फोट,एक बालकको मृत्यु,एक बालिका गम्भिर (13,743)
OMG….दुखद : निर्मलाको परिवारमा द्धन्द , श्रीमानबाट कुटिईन् दुर्गादेवी…. पूरा… (13,438)
Wow…हात खुट्टा गुमाएका कृष्णको ‘राधा’ बनेर आईन रुकुमकी रुपा ! सबैलाइ प्रेरणा मिलोस… (12,968)
जस्तोसुकै जिद्धी थाइराइडलाई पनि केहि दिनमै पूर्ण रुपमा निको पार्ने यो गोप्य घरेलु उपचार विधि (11,599)